ALSHABAABKA MUSANBIIG | Hassan Mudane
Waa koox dhallinyaro mayal adag oo ka dagaalama dalka Musanbiig, waxaa la dhahaa ‘Ansar al-Sunna’ laakiin dadka deegaanka waxay u yaqaanaan Alshabaab. Waxay degan yihiin gobalka “Cabo Delgado,” oo ah gobal ay ku badan yihiin muslimiin, wuxuu hodan ku yahay macdan iyo shidaal.
Waxaa la aasaasay sanadkii 2014 laakiin saddex sano ka dib ayay billaabayn weeraradooda argagaxiso. Waxaa bartilmaamayd u ah saldhigyada booliska, ciidanka dowladda, shirkadaha ajanabiga, ururada samofalka iyo dadka rayid ah ee u xog warrama booliska. Wixii ka dambeeyay oktoobar 2017, waxay sameeyeen weeraro, dil qorsheysan, qoor goyn, iyo afduub.
Dhallinyarada ka tirsan kooxda waxay ka yimaadayn dalka Kenya. Sida lagu sheegay deraasad ay sameeyeen Prof. Pereira, salvador iyo shiikh habibe. Waxaa la xaqiijiyay in ay xer u ahaayeen wadaad xagjir Keenyaan ah, oo 2012 lagu dilay Mombasa. Geeridiisa ka dib waxay u guurayn degmada Kibit, Tansaaniya. Waa magaalo u dhow xudduudda dalka Musanbiig.
Sidoo kale, deraasaddu waxay sheegtay: 1. In sanado badan ka hor ay soo gaarayn gobalka Cabo Delgado. 2. In dhammaadka sanadkii 2015 ay isku beddelayn koox militari. 3. Iyo in ay yihiin dhallinyaro aan helin waxbarasho iskuul, intooda badan waxay ka soojeedaan qabiilka “Kimwani.”
Deraasaddu, waxay kaloo daah-qaadday meelaha ay ka helaan dhaqaalaha. Isha koowaad, waa ganacsiga sharciddarada ah. Isha labaad, waa tabarrucaadda ay ka helaan gudaha iyo dibadda.
Pereira, isagu wuxuu ku dooday in Alshabaabka Musanbiig ay leeyihiin laba ujeeddo: 1. Abuurista xasilooniddaro si ay uga faa’ideystaan ganacsiga sharciddarada ah. 2. Iyo macaashka ka soo gala in ay ku taageeraan kooxaha kale ee ka jira Kenya, Tansaaniya iyo Soomaaliya.
-5 oktoobar 2017, waxay weerarayn saddex saldhig ciidan, waxay dilayn laba sarkaal boolis ah.
-27 Maarso 2018, waxay weerar ku qaadayn magaalada Monjane, toban qof oo ay ku jiraan hoggaamiyo dhaqameedyo ayay qoorta ka gooyeen.
-11 Julaayo 2018, waxay weerar ku dilayn afar askari boolis ah.
Intaas oo weerar ah waxaa qaaday dhallinyaro marin-habaabay, oo markii hore dalka ku soo galay dacwo fidin iyo nabad laakiin isku beddelay garab militari.
Dowladda waxay ka bixisay jawaab adag. Waxay ku qaadday weeraro. Waxay ka burburisay toddoba masaajid oo fadhi u ahaa kooxda. Waxay ka faafin jirayn fekerkooda jihaadiga ah, diidmadooda ku aaddan waxbarashada reer galbeedka iyo rabitaankooda xukun islaami ah. Baarlamaankuna, wuxuu si degdeg ah ku ansixiyay sharci ka dhan ah falka argagaxisonnimo.
ALSHABAABKA MUSANBIIG VS ALSHABAABKA SOOMAALIYA
Deraasaddu, waxay beenisay xanta gudaha ka jirtay ee ku saabsanayd in uu xiriir ka dhexeeyo labada Alshabaab. Laakiin waxay iskaga eg yihiin dhanka habka (method).
← AMISOM KA DIB: MAXAY QAADANAYSAA AMNIGA SOOMAALIYA?
BOOQASHADII FARMAAJO EE ERITREA IYO WELWELKA JABUUTI →